शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता — विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति – Maitri News
शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता — विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति
maitrinews March 8, 2017
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा महिला आन्दोलनको जग आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली महिलाबाट समान अधिकारका लागि एक शताब्दीदेखि निरन्तर रुपमा हुँदै आएको सङ्घर्ष र बलिदानीको परिणामस्वरुप अहिले राज्यका तीन महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व रहन पुग्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारी एउटा सुखद संयोगका रुपमा चित्रण गर्न रुचाउनुहुन्छ । यद्यपि, नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको स्वीकार्नु हुने उहाँ नेपालको संविधानले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका चाहिँ खोलिदिएको तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति भने अझै बनिसकेको धारणा राख्नुहुन्छ ।
नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका अवसर। पारेर नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, संविधान संरक्षकका हैसियतले खेल्नुभएको भूमिका, समसामयिक विषय र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा उहाँको अन्तर्वार्ता ः
– २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका विषयमा उठाइएको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ । समानताको लक्ष्यमा पुग्न अहिलेलाई एक तिहाइ आरक्षण भनिएको, त्यो मेरो आफ्नै हातले लेखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिएँ । त्यतिखेर पनि के लेख्न हुन्छ के लेख्न हुँदैन भनेर झमेला भएको थियो । हुन्छ हुन्छ भन्दै जोरजुलुम गरेपछि मैले हातले लेखेकोलाई टाइप गरेर दर्ता गराएको जस्तो लाग्दछ । त्यसबेला हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो । त्यतिखेर महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हो । राजनीतिमा पाँच प्रतिशत पनि महिला सहभागी नभएको बेलामा आरक्षणको व्यवस्था नगरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै वृद्धि नहुने देखेर एक तिहाइको कुरा त्यसबेला अघि सारिएको हो । त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो । नारामा सबै अधिकार बराबरी भनियो, व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मैले जोड गरेको हुँ । संसदबाट पारित पनि भएको हो । महिला र पुरुष बराबरी त हुनै बाँकी छ, बराबरीमा बढ्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ । अबको स्थानीय तहलाई हेर्दा महिला सहभागिता ३३ देखि ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ । तर त्यो उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता जस्तो भइरहेको छ । त्यसमा टेकेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गरिएको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ । त्यो गर्दा परिणाममा चाहिँ के आउँछ भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन । प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका त खुल्यो तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति बनिसकेको छैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधान जारी भएपछिको मुलुकको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
विश्वसामु नेपाललाई एक सबल र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न यहाँको तर्फबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ ?
– देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु । उहाँहरु मिलेर जानुहुन्छ भन्ने नै मेरो आशा छ । यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । महिला पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छन् । समावेशी छ, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ, जातीय छुवाछूत बन्द भएको छ । लामो समयसम्म रहेका रीतिथितिलाई व्यवस्थित गर्न समय त लाग्छ नै । सङ्घीयताको विषयमा पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश गठन भइसकेको छ । यो उपलब्धिलाई जनतासामु पु¥याउन प्रयास नगर्नु भनेको त कमजोरी हुन्छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कुरा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा नभएका राम्रा कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सिद्धान्तको हिसाबले सविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ । कुरा मात्रै गरेर कसरी देश अधि बढ्छ रु प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्यो नि । मैले नेताहरुलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो । म आशावादी छु । नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि अरु चुनावहरु क्रमशः हुन्छन् । माघ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । संविधानमै अहिलेको संसदको आयु तोकिएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा आउने रिक्ततालाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ भनेको छु । स्थानीय तहको चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेकाले ढिलो भएपनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु ।
श्रम बेच्न बिदेसिन खोज्ने नेपाली महिलालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न र स्वाभिमानी बनाउन सरकारबाट के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मुलुकमा ठूल्ठूला जनआन्दोलन भए । राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर नेताको चालचलन फेरिएन । जीवन शैली सरल हुन सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो पनि छ नि ?
Previous Previous post: FDA announces protest programmes including Nepal Banda
Next Next post: खानेपानी संस्थानले दुई हप्ताभित्र २० लिटरको जार ल्याउने